PressReader - Ilanga langeSonto: 2017-11-12 - Kubikwa umkhonyovu egatsheni LE-ANC
Kubikwa umkhonyovu egatsheni LE-ANC
Bathi uhlu obeluvela kwi-database alukho emthethweni
LIKHUNGETHWE yizinkinga zangaphakathi igatsha le-african National Congress (ANC) imandlakayise eliku-ward 12, emzumbe, eningizimu yekwazulu-natal, njengoba kusolwana ngomkhonyovu.
Umnu Thembinkosi Khomo ( osesithombeni) ozichaze njengonobhala waleli gatsha kusukela ngonyaka wezi-2013, utheleke emahhovisi ELANGA ephelezelwa ngumnu Siphamandla Caluza. Ubephethe imfumbamfumba yamaphepha awubufakazi, ekhala ngokuthi igatsha lakhe selithumele amagama ekomkhulu laleli qembu nakusifundazwe njengamele igastha futhi asemthethweni, kepha yena njengonobhala walo angahambisani nakho.
Kuyaziwa ukuthi njengamanje amagatsha E-ANC ezindaweni eziningi amatasa, akhetha abazowamela engqungqutheleni kazwelonke ebhekwe ngabomvu yokukhetha ubuholi BE-ANC ezoba segoli ngenyanga ezayo.
Umnu Khomo uveze ukuthi emhlanganweni obungesonto enkulisa yendawo ufike sekuha- mbe isikhathi, wafica umhlangano wenganyelwe ngusihlalo wegatsha umnu Phiwokuhle Bravo Zamisa, nedlanzana labantu, kukhona nobethunywe yihhovisi lesifundazwe.
“Besazi ukuthi umhlangano uzokwenzelwa ethulubheke CP School kepha sathola ukuthi usuthuthelwe enkulisa. Sifike sekuntambama, sathi singena nje usihlalo wasitshela ukuthi usuphelile. Ngibe sengibuza obekwenzeka lapho, ngatshelwa ukuthi bekuphothulwa uhlu lwamagama amalunga egatsha okuzosetshenzelwa phezu kwalo njengoba sekuyiwa okhethweni lobuholi BE-ANC kuzwelonke ngenyanga ezayo, egoli. Ngilubekile uvo lwami njengonobhala ukuthi ngeke luphothulwe zingakalungiswa izinkinga ezikulo,” kusho umnu Khomo.
Umnu Khomo uthi kube nokuphakama kwemimoya kulowo mhlangano, ikakhulukazi uma eseveza ukuthi uhlu lwamalunga abhaliswe kwi- database iningi lawo alukho emthethweni. Uthi uze wabizelwa emnyango ngabehamba nabo sekubonakala ukuthi impilo yakhe isengcupheni ngoba kungahanjiswana nakushoyo.
“Ngithe sengihambile ngathola ucingo oluthi kuzohlala umhlanga- no wegatsha lonke ngolwesithathu lapho kuzobe sekusongwa, kuhanjiswa isinqumo segatsha ekomkhulu. Ngolwesithathu uphoqiwe lowo mhlangano (ukuba uhlale) yize amalunga abengaphelele, kwathiwa igatsha selivumelene, konke sekumi ngomumo. Ngibe sengibhala incwadi yokukhononda ngayibhekisa esifundazweni, nakomkhulu eluthuli House, egoli, ngibazisa ukuthi izinto azihambanga kahle.
Nakhu akhala ngakho umnu Khomo:
Amalunga amadala awajoyinisa yena amaningi ashiywe ngaphandle kwafakwa amasha ajoyine ngonhlaba (May) nonyaka, okusho ukuthi awakakulungeli ukuvota.
Kwi- database kunamalunga amathathu amagama awo aphindeke kabili.
Kushiywe ngaphandle amalunga amadala asemthethweni kwafakwa amasha.
Kukhona amalunga okubhalwe ukuthi ajoyine ngo-r60 ekubeni yena awaziyo abejoyina ngo-r20.
Usihlalo uzilandele yena i-database ehhovisi lesifundazwe ekubeni kumele kube ngunobhala wegatsha owenza lokho.
Izincwadi nobufakazi bamalunga aphindiwe kwi- database ILANGA Langesonto linazo.
Ebuzwa ngesimo sozinzo kuleli gatsha umnu Khomo ukuvezile ukuthi kukhona ukuhlukana ngemibono njengoba ikwazuluNatal ivele yehlukene ngokuthi ngubani okufanele ahole I-ANC phakathi kukadkt Nkosazane Dlamini Zuma (NDZ), nomnu Cyril Rama-phosa (CR17) nabanye. Uthi nakhona lapha ubona ukuthi yinhlaba yehlukane isibili.
“Mina ngifuna ubulungiswa, anginandaba nokuthi kuwina bani kepha igatsha alibe neqiniso ukuze kukhethwe ubuholi obuyibo, kungaphoqwa abantu ukuba bakhethe umuntu abangamfuni,” kuphetha umnu Khomo.
Umnu Zamisa ezwa lezi ndaba uvele wathi: “Konke esikwenzile naye umnu Khomo uyingxenye yakho. Simbuzile ukuthi ubethuleleni sonke lesi sikhathi engayilungisi indaba ye- database uma ebeyibonile ukuthi ayilungile. Uyahlupha nokho ngokuthanda ukuneka izindaba zegatsha emaphephandabeni, ekubeni akaqali ukuyenza le nto.
"Futhi akaseyena unobhala kusukela ngosuku lomhlangano wangolwesihlanu - uphume sengathi uyabuya uyophendula ucingo, zaya.”
Kuyaziwa ukuthi akulona lodwa leli gatsha elikhungethwe yizinkinga zoqhekeko njengoba kubhekwe kule ngqungquthela.